पूजासँगै पान- साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार
ललितपुर — माहोल सरस्वती पूजाको तर परिसर भने मैथिलीमय । चित्रकला मात्रै हैन, मैथिली परिकार र त्यसपछि अन्तिममा खाने मिठा पान पनि । पुलचोकस्थित इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको दृश्य हो यो ।
पुलचोकको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा आइतबार प्रदर्शित मैथिली चित्रकला र खानपान । तस्बिर : शिल्पा कर्ण/कान्तिपुर
क्याम्पस परिसरमा रहेको सरस्वती मन्दिरमा पूजा गर्न आउनेका लागि मिथिला चित्रकला र मैथिली परिकारको स्वाद निकै मौलिक लाग्थ्यो ।
पहिले सरस्वतीको दर्शन–पूजन, अनि मिथिला चित्रकलाको अवलोकन । मन्दिरपछि कला प्रदर्शनीस्थल पुग्ने बाटो बनाइएको थियो । प्रदर्शनीमा कतै महिलाले ढिकी–जाँतो गरिरहेका तस्बिर थिए भने कतै घरआँगन सफा गरिरहेका दृश्य । मैथिली समुदायमा निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ माछा । यो शुभको संकेत हो ।
प्राय: मैथिली चित्रकारले माछाको प्रतीक प्रयोग गर्छन् । प्रदर्शनीमा भने माछा मार्ने ‘मल्लाह’ ले जालबाट माछा निकालेर बेच्दै गरेका तस्बिर पनि थिए । कृष्णले बाँसुरी बजाइरहेका र पानी भरेर फर्किरहेका गोपिनीको दृश्य भने पेन्टिङमा उतारिएको थियो । सीता र रामको स्वयंवर, जसलाई मिथिला परम्पराममा विशिष्ट स्थान दिइन्छ, प्रदर्शनीमा ती दृश्य झल्किने पेन्टिङ पनि थिए ।
पूजा समितिका रवि मिश्रका अनुसार ३५ चित्र प्रदर्शनीमा राखिएका थिए । तिनलाई सिर्जना गरेका थिए, हरिओम मेहता, मनीषा साह, अजितकुमार साह, रेणु यादव र हरेराम यादवले । क्याम्पसको सरस्वती पूजा समितिका अनुसार आइतबार करिब १३ हजार श्रद्धालु पूजा र प्रदर्शनीमा सहभागी भए ।
प्रदर्शनीसँगै मिथिला परिकार पनि राखिएको थियो । स्टलमा सजाइएका थिए— दूधपिठ्ठी, पिरुकिया, खजुरिया लगायतका परिकार । ‘पूरै मधेसको संस्कृति झल्कियोस् भनेर प्रदर्शनी गरेका हौं,’ पूजा समिति अध्यक्ष साहिल मण्डलले भने, ‘मैथिली परिकारमध्ये धेरै यस्ता छन् जसलाई राजधानीले चिन्दैन । कम्तीमा युवा पुस्तामाझ चिनाउन सकियोस् भनेर वसन्त पञ्चमीका अवसरमा प्रदर्शनी राखेका हौं ।’
क्याम्पसले यसरी प्रदर्शनी गरेको यो तेस्रोपल्ट हो । आइतबार क्याम्पसमा सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि गरिएको थियो ।
प्रकाशित : माघ २८, २०७५ ०८:१५
उपकरण, अनुधानलगायतमा सहयोग गरिए पनि सेवामा सुधार देखिएको छैन
माघ २८, २०७५ अमृता अनमोल, ठाकुरसिंह थारू
बुटवल/नेपालगन्ज — भौतिक अवस्था र उपकरण अभावले प्रदेश ५ का सरकारी अस्पतालको उपचार सेवा प्रभावित हुँदै गएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशमातहत आएका अस्पतालको सुधार अभियान चलाएको मन्त्री सुदर्शन बरालले बताए ।
सहजपुर स्वास्थ्य चौकीमा सञ्चालन भएको स्वास्थ्य सिविरमा जाँच गराउन आएका कैलालीका महिलाहरु । तस्बिर : ठाकुरसिंह/कान्तिपुर
त्यसअन्तर्गत माग र आवश्यकताका आधारमा प्रदेशमातहतका अस्पतालमा उपकरण तथा कार्यक्रममा राहत दिन थालिएको उनको दाबी छ ।
मन्त्रालयले चालु वर्षमा चालु र पुँजीगत गरी १९ अस्पताललाई २६ करोड ९४ लाख ३० हजार रुपैयाँ छुटयाएको थियो । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले उपकरण खरिदका लागि ९ करोड ४ लाख ५० हजार रकम पाएको छ । भेरी प्रादेशिक अस्पताललाई ८ करोड ७ लाख ७८ हजार र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई ४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ उपकरण खरिदका लागि छुटयाइएको छ ।
आयुर्वेद चिकित्सालय दाङले ७० लाख र लुम्बिनी आयुर्वेद चिकित्सालयले ५० लाख रुपैयाँ अनुदान पाएका छन् । जिल्ला अस्पताल तथा आयुर्वेद अस्पतालले पनि १३ देखि ४३ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान पाएका छन् तर अस्पताल सुधार हुनुको साटो झन् झन् जीर्ण बन्दै गएका छन् ।
सेवा पनि प्रभावित बन्दै गएका छन् । ‘यस वर्षको पहिलो चरणमा उपकरण सुधारका लागि काम गर्‍यौं । ठूला अस्पताललाई उपकरण खरिद नै गरेर पनि दिँदै छौं,’ मन्त्री बरालले भने, ‘यसपछि पूर्वाधार सुधार र जनशक्तिमा सहयोग गर्ने योजना छ ।’
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा १३ जिल्लाबाट दैनिक १ हजार बिरामी उपचारका लागि आउने गर्छन् तर बिरामीको चापअनुसार पूर्वाधार छैन । बिरामी साँघुरो र जोखिमयुक्त भवनमा उपचार गर्न बाध्य छन् । बिरामी जाँच्ने धेरैजसो उपकरण जीर्ण छन् ।
एक्सरे, रगत तथा थुक, खकारलगायत परीक्षण गर्ने मेसिन बिग्रिरहने समस्या छ । ‘एक्सरेको पालो पाउन मात्रै ३ दिन लाग्यो,’ आइतबार अस्पताल परिसरमा भेटिएका तिलोत्तमाका राजु बस्नेतले भने, ‘सस्तो पर्छ भनेर पालो कुरेँ । अन्तिममा मसिन राम्रो छैन पो भने ।’ उनी खुट्टाको एक्सरे गर्न आएका थिए ।
अस्पतालको भवन उस्तै छ । विसं १९६७ मा ६ बेडबाट सुरु भएको अस्पतालले ०१६ मा बनेको भवनमा जोखिमपूर्ण उपचार सेवा दिइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्था एनएचएसआरपीको अध्ययनले उच्च भूकम्पीय जोखिममा राखेको उक्त भवनलाई रंगरोगन गरेर ढाकिएको छ । पानी पर्दा भवन धेरै ठाउँबाट चुहिन्छ । अस्पतालका मेसु डा. कृष्णप्रसाद खनालले ५० बेडका संरचनामा अस्पताल चलेको बताए । ‘उपकरण र भौतिक अवस्था दुवै कमजोर छन्,’ उनले भने, ‘यसले उपचार सेवा प्रभावित भएको छ ।’
लुम्बिनी मात्र होइन, प्रदेशस्तरका अधिकांश अस्पतालको भौतिक अवस्था नाजुक छ । बिरामी जाँच्ने उपकरणसमेत अपुग छन् । भएका पनि जीर्ण । छिनछिनमा बिग्रन्छन् । बिरामी जाँच्ने स्थानसमेत नहँुदा समस्यामाथि समस्या थपिएको छ ।
जिल्ला अस्पतालको अवस्था अझ नाजुक छ । त्यसमध्येको हो, नवलपरासी पश्चिमको पृथ्वीचन्द्र अस्पताल । यहाँ बिरामीलाई शल्यक्रिया र प्रसूति गराउने स्थानसमेत अभाव छ । ‘उपकरण अभावले सामान्य ल्याबमा पनि समस्या भएको मेडिकल सुपरिटेन्ड डा. अनन्तकमार शर्माले बताए ।
संघमातहतका प्रदेश ५ का २५ अस्पताल अहिले प्रदेश सरकारमातहत आएका छन् । त्यसमा ३ प्रादेशिक, ११ जिल्ला, एक सरकारी र ११ आयुर्वेद अस्पताल छन् । आयुर्वेदमा एउटा क्षेत्रीय, २ अञ्चल र ८ जिल्ला अस्पताल छन् । यी अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधार र उपकरणको चरम अभाव छ । यसले गर्दा बिरामी सरकारीमा नि:शुल्क उपचार सेवा लिनबाट वञ्चित छन् ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको अध्ययनअनुसार आवश्यक पर्ने ६० प्रतिशत उपकरण अभाव छ । उपकरण र पूर्वाधार अभावले मात्रै अस्पताल आउने बिरामीमध्ये करिब ४० प्रतिशत पुन: निजी अस्पतालमा जान बाध्य छन् । ‘भएकामा पनि जीर्ण र पुराना उपकरण छन्,’ प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. विनोद गिरीले भने, ‘यसले अस्पतालको सेवा प्रभावित भएको छ ।’ सेवा अभावले आमनागरिकको सरकारी अस्पतालप्रतिको विश्वास घट्दै गएको उनले बताए ।
नाम फेरियो, जनशक्ति थपिएन
पछिल्लो समय भेरी अञ्चल अस्पताललाई प्रादेशिक बनाइएको छ तर जनशक्ति अभाव भने उस्तै । उक्त अस्पताललाई प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको रिफरलका रूपमा मानिन्छ । अञ्चल अस्पतालबाट प्रदेशका रूपमा विकास गरिए पनि भौतिक संरचना, उपकरण र जनशक्तिका हकमा कमजोर छ ।
यस क्षेत्रकै ठूलो सरकारी अस्पतालमा दैनिक ३ सयभन्दा बढी उपचारका लागि आउने गरेका छन् । ‘अञ्चलबाट प्रदेश अस्पताल बनाइएको छ तर जनशक्तिका हकमा सहयोग आएको छैन,’ प्रादेशिक भेरी अस्पतालका प्रमुख डा. रूपानन्द अधिकारीलेभने, ‘हामीसँग दरबन्दीअनुसार चिकित्सक अभाव छ जसका कारण हामीले चाहेजस्तो सेवासुविधा दिन सकेका छैनौं ।’
उक्त अस्पतालमा ५७ जना चिकित्सकको दरबन्दी छ । हाल ३३ चिकित्सक कार्यरत छन् । दरबन्दीभन्दा कम चिकित्सक रहेका कारण बार्ड बनाएर उपचार सेवा दिने गरिएको छ । एक चिकित्सकले दर्जनाैं बिरामीको उपचार गर्नुपर्छ । अस्पतालमा युनिट बनाएर स्वास्थ्य उपचार व्यवस्था गरिए प्रभावकारी हुने चिकित्सक बताउँछन् ।
‘युनिट बनाउन आवश्यक छ । यसरी गर्ने हो भने एउटा चिकित्सकले ६ जना बिरामी हेर्न सक्छन् । यसले उपचारमा निकै सहज हुने थियो,’ अस्पताल प्रमुख अधिकारीले भने, ‘वृद्ध वार्ड, जनरल वार्ड, बर्न वार्ड बनाएर उपचार दिइरहेका छौँ ।’
चिकित्सकको निगरानीमा स्वास्थ्यकर्मी र नर्सहरूले बिरामीको स्वास्थ्य उपचार गर्दै आएका छन् । युनिट बनाउन सक्ने हो भने २४ घण्टै स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्न सकिने अस्पतालले जनाएको छ । उक्त अस्पतालमा न्युरो सर्जन, नेप्रो चिकित्सक छैनन् । न्युरो सर्जन विशेषज्ञ नहुँदा अन्य चिकित्सकले उपचार गर्दै आएका छन् । अस्पतालमा २ सय १२ कर्मचारी दरबन्दी छ ।
डाइलासिस, भिडियो एक्सरे, सामान्य एक्सरे र व्यवस्थित ल्याब छ तर भिडियो एक्सरेलगायत सुविधा सर्वसाधारणले कम पाउने गरेका छन् जसका कारण सर्वसाधारण महँगो शुल्क तिरेर अन्यत्र गराउन बाध्य छन् ।
इन्डोसकोपीलगायत सुविधाको व्यवस्था छिट्टै हुने अस्पतालले जनाएको छ । ‘खासमा यहाँ आएका बिरामीलाई कसरी भरपर्दो सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने नै हो । त्यहीअनुसार सरकारले जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसका लागि सरकारले गृहकार्य गर्न आवश्यक छ ।’
अस्पताल विकास समितिले इमरजेन्सी सेवाका लागि न्यूनतम शुल्क तोकेको छ । यसअघिको ओपीडी सेवाका लागि जम्मा २० रुपैयाँ थियो । अस्पतालले नि:शुल्क औषधि दिने भने पनि अधिकांश बाहिरबाट किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको सर्वसाधारण बताउँछन् ।
चिकित्सकले लेख्ने गरेका औषधि अस्पतालको फार्मेसीमा छैन भन्ने जवाफ दिने गरिएको छ । सर्वसाधारणले पाउने नि:शुल्क औषधि सरकारले पर्याप्त रूपमा नपठाउँदा समस्या आइरहेको छ ।
प्रकाशित : माघ २८, २०७५ ०८:१३